Gedo: Al-shabaab oo khasaaro xooggan gaarsiiyey ciidamada AMISOM ee Kenya ka socda | Gaaloos.com
Home » News » Gedo: Al-shabaab oo khasaaro xooggan gaarsiiyey ciidamada AMISOM ee Kenya ka socda
Gedo: Al-shabaab oo khasaaro xooggan gaarsiiyey ciidamada AMISOM ee Kenya ka socda
Subaxnimadii hore ee maanta oo Jimce ah ayaa dagaalyahano ka tirsan ururka al-Shabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen Saldhig ciidamada Kenya ee KDF kulahaayeen tuulada Ceel Cadde oo ka tirsan gobolka Gedo, waxaana ay masaafo 50km ah dhanka Koonfureed uga beegan tahay Garbahaarey.
Weerarkan ayaa ku bilowdey qarax lagu garaacey albaabka hore ee Saldhiga kaas oo loo adeegsadey gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Xilliga qaraxu dhacaayey ayaa inta badan ciidamada ku xereysnaa saldhiggaas hurdeen sida al-Shabaab u sheegeen qaar kamid ah warbaahinta caalamka.
Qaraxa kadib ciidamo si xoogleh u hubeysan ayaa gudaha u galay saldhigga, waxaana ay iska caabin kala kulmeen qaar kamid ah ciidanka. Dagaalka ayaa qaatey muddo saacado ah.
Wararku waxay sheegayaan in Dagaalyahanadii al-Shabaab saldhiggaas la wareegeen, ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Kenya nolosha ku qabteen.
Afhayeen u hadley al-Shabaab oo magiciisa ku sheegey Sh. Cabdicasiis Abu-muscab ayaa sheegey in ay dileen 63 Askeri isla markaana ay gubeen 28 gaari. Wuxuu sheegtey in ay hub iyo saanad xooggan saldhiiga ka rarteen iyo wixii gawaari ku harey.
War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Difaaca ee Kenya ayaa lagu sheegey in khasaare jiro laakiin aysan weli sheegi karin tirada rasmiga ah. (AKHRI)
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Jen. Diini ayaa canbaareeyey weerarka waxaana uu tacsi u direy kuwa la alaayey ehelkooda.
Dadka ku nool Ceel Cadde ayaa sheegaya in meydadka askarta Kenya jidadka lagu jiidey, sidoo kale maxaabiis badan ay qabsadeen Malayshiyada al-Shabaab ee weerarka gaadmada ah ku heley ciidamada Kenya.
Kadib dagaalkii Ceel Cadde oo weli socda diyaaradaha dagaalka ee Kenya ayaa weerar ku qaadey gobolka Gedo goobo ay sheegeen in ay ku sugan yihiin al-Shabaab waxaana ay u geysteen duqeyn xoog leh, duqeynta waxaa ka qaybqaatey diyaaradaha qumaatiga u kaca ee hubku ku rakiban yahay, kuwaas oo weeraray Dagaalyahadii weeraray Saldhigii Ceel Cadde, al-Shabaab ayaa isaga difaacaya hubka culus ee lidka diyaaradaha.
Si kastaba ha ahaatee waa weerarkii ugu cuslaa ee muddooyinkan al-Shabaab soo qaadaan, kadib dagaalkii qabsadey ciidamada Uganda ee gobolka Shabeelada Hoose dhamaadkiis anadkii hore.
Weerarkan ayaa ku soo beegmaaya iyada oo madaxda Soomaalida shir uga socdo magaalada Kismaayo oo horey ay al_Shabaab uga qabteen ciidamada Kenya iyo Jamahadii Raaskaanbooni
Title: Gedo: Al-shabaab oo khasaaro xooggan gaarsiiyey ciidamada AMISOM ee Kenya ka socda
Posted by galmada Net, Published at 3:03 AM and have 0 comments